Hamma Oromoon ABO fi WBO waliin hin hiriirretti … – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHamma Oromoon ABO fi WBO waliin hin hiriirretti …
Hamma Oromoon ABO fi WBO waliin hin hiriirretti …
Hamma Oromoon ABO fi WBO waliin hin hiriirretti Bilisummaan Oromoo fi Walabummaan Oromiyaa Abjuudha!
Ol utaallees, lafa seennus Bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa otoo hin sharafiin humni galmaan gahu ABO/WBO qofa!
Dhugaa ABO/WBOn Oromoo biraa qaban garuu waca miidiyaarra godhamuun, ijaarsa gandaa fi amantiin ukkamfamuun isaa Oromootti salphina fide.
Waanta afaan dubbatan tokko lafarratti hojjechuun akkuma isa afaaniin dubbatan sanaa salphaa miti. Waanti afaaniin dubbatan, ololaan eenyuyyuu eessayyuu ta’ee dubbachuu danda’a. Namni kamuu dubbii afaaniin dubbatamtu mana ofii keessaa ta’ee, siree ofirraa ciisee, kaffee keessa ta’ee bargarii ciffachaa juusii unachaa waan itti fakkaate haasuhuu danda’a.
Afaan dubbiin dubbatamtu yeroo haasa’amtu mimmi’eessuu qofa. Jechoota miira namaa tuqan qopheeffachuu qofa. Iddoi xiinsammuu fi lapheen namaa jirtu irratti xiyyeeffachuun miidiyatti gadi bahuu qofa. Sana booda nama #dubbiin_macheessuun waan dubbatame sana qofaan waan barbaannu sana waan harkatti galchannu nutti fakkaachuun bubbee waliin kaachaa jirra. Dubbiin afaaniin miidiyarraa afuufamu dubbiirra kan darbe lafarratti waan xaphi godhu tokko hin qabu. Abjuun damma nyaachuudha! Abjuun aannan unachuudha!
Warreenuma dubbii akka akawwiitti miidiyarraa akawwan kana mee waanuma haasoftan kana lafa nuu qabsiisa, lafarratti hojiin nutti agarsiisaa jennee yeroo gaafannu #dhadhaa_ibidda_buute tahu. Sekoondii tokkotti of biraa dhabdu. Erga waca miidiyaarraa gootan kana #lafaratti_hojiirra hin oolchitan tahee maaf hin dhaabdani? yoo jettan “nuhi #tarsiimoo_isiniif_baasna isin tarsiimoo keenyaan hojiirra olchaa” nuun jedhu. Kana jechuun kiyyoo nuhi isiniif qopheessine keessa seenaa qabsoo sabaas dhabamsiisaa jechuu isaaniiti.
Faallaa kanaan ammoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaatti kan baayyee #haasahuu_hin_barbaanne, garuu ammoo tarsiimoo ofii lafa kaawwatee akka tarsiimoo sanaan lafarratti hojiirra kan jiru #ABO fi #WBO qofaadha! ABO/WBOn wacaa fi olola sobaa miidiyarraa godhamutti hin amanan. Waan hojjetan ammoo #lafa_jala akka qabsoon Oromoo hin gaaga’amnetti hojjetu. Hojiin ABO fi WBO akka #hobobsaa_korbeessaa_reetti tulluu hin jeequ. Hojiin ABO fi WBO akka adeemsa leencaati. Eessaa ka’ee garamitti akka deemu beeka. ABO/WBOn akka kormaa leencaati. Ofii hagabuu bulee Oromoo bilisoomsuuf kaata malee wacuun qabsoo hin gurgurre.
Dhugaan ABO/WBOn Oromoo biraa qaban galuufii dide. Oromoon sagalee wacaa fi ololaa dhaggeeffata. ABO/WBOn hojii lafarraatti hojjetamee Oromoo humneessu hojjeta. Ijii fi gurri Oromoo lafa wacaa jira. Lafa wacaa sana garuu humni hin jiru. Duwwaadha. Kan wacu fi iyyu duwwaadha. Humni waca sana duuba jiru sagaled qofa. Kilaashiin, boonbiin hin jiru. Waca sana booda waraanni hin jiru. Waraanni waan hin jirreef sa’aatii ammaa kanatti warri wacaan ala taa’anii lafa sochoosaa turan har’a biyya keessaa galanii jennaan afaan qabatanii jiru. ABOn garuu duris waca irra hojii hojjeechuun beekama waan taheef hojiitti jira. WBOn ammoo qawween diinni dhiiga Oromoo dhangalaasaa jiru haleelaa jira. Kuni dhugaa lafa jirtudha.
Egaa har’as kan Oromof hin galle Oromoon #bakka_humni_Oromoo jiru wallaaluu isaati. Humni Oromoo mataa ol qabachiisse ABO ture. Humni ofii lubbuu wareegee Oromoo lafaa kaase ABO ture. Humni sirna #nafxanyaatti_ibidda_dhaamuu hin dandeenye qabsiisee ABO ture. Humni qeerroo hundeessee Wayyaanee dhabmsiisee ABO ture. Humni Kaartaa Oromiyaa addnunyaatti gadi baase ABO ture. Humni Oromoon gaanfa Afirikaa keessaatti humna murteessaa tahuu addunyaaf raggaase ABO ture. Humni qabsoo Oromoo fi irbuu jaaallan wareegamanii otoo maallaqaan hin sharafiin qabatee harkaa qabu ABOdha. Kolbaan ABO inni #Niwukilaariin ammoo WBOdha.
ABO fi WBOn haala amma keessaa jiraniin (lafaan) bakka garaa garaa jiraatanis galmi isaanii tokkodha! Abbaa fi ilmadha. Galma tokkicha qabu. Oromoon humna ABO/WBO keessaa jiru hubachuun hamma har’aatti rakkachaa jira. Oromoon #DHUGAA ABO/WBOn qabatanii deeman sanaan laga ceehuun biyya ijaarrachuu akka dandahu hubachuu dadhabuun isaa ammoo garbummaa bara baraaf haala mijeessaa jira. Ol utaallees lafa seennus Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa otoo hin sharafiin humni galmaan gahu ABO/WBO qofa! Har’a soba fakkaata. Dhugummaa kanaa kan mirkaneessu deemsa qabsoo bilisummaa Oromoon waggoota 4 as ilaaluun gahaadha. Akkamitti qabsoon keenya akka gatate ilaalaa. Barootuma 4n darban sana keessaatti ammoo #ejjennoo_ABO, #ejjennoo_WBO ilaalaa. Humnoota kayyoo hin sharafne kan jennuuf ragaa waliinidha. Bara 2018 dhaabota polotikaa Oromoo keessaa kan #mootummaa_Itoophiyaa_hudhee wal qabe ABO qofa. “Oromoon waraana mataa ishee qabaachuu qabdi ykn ammoo naannoleen biroo illee waraana ijaarratanii qaban diiguu qabu” jedhee kan OPDO hudhee qabe #Jaal_Dawwud fi #Jaalleewwan_Daawud turan. Yeroo sanatti Oromoon ABO hubate muraasadha. Humna keenya WBOs kan hubate Oromoo muraasadha. Keessaattuu duula xawalwaalloni Abbaan Duulaa guddise ABO fi WBO irratti gaggeessan hin dagatamu! Yeroo sanatti gootni Oromoo xawalwaallota OPDO jala seenanii ABO fi WBO irratti duulan turan. Kuni qaanii guddaadha. Haa ta’uuti ejjennoon ABO/WBOn fudhatan sirrii tahuu isaa wagga lama booda Oromoof ife.
Har’a TPLF uummata miliyoona 6 qabattee mootummaa Itophiyaa kan finceessisaa jirtu #WARAANA_HIDHATE waan qabduufidha. Oromoon garuu miiliyoona 50 tahee otoo jiruu du’a sareef hin malle du’aa jira. Sodaan ABOn qabu isa kana ture. Dhugaadhas. Kanaaf #ABOn_siyaasa_Oromoo keessaatti madaallii guddaa kaasa. ABOn siyaasa Itophiyaafis qoricha hiriyyaa hin qabnedha. Waraanni ABOn ijaare, waraanni Oromoo WBOn, akkuma ABO dhugaa guddaa Oromoo biraa qaba. Dhugaan ABO/WBOn Oromoo biraa qaban garuu waca miidiyaarra godhamuun, ijaarsa gandaa, amantiin ukkaamfamuun isaa Oromootti salphina fide. Dhugaan kuni ABOf deebitee Oromoon ABO fi WBO jala hin hiriiru taanaan salphina kana caaluttis dhufuuf jirra.
ABO taanee dhalanne, ABO taanee duuna!
WBOn gaachana Oromoo fi Oromiyaati!
Dhimma Araaraa: Dhibdeen siyaasaa OPDO fi ABO gidduu hin jiru Via Lammii Beenya, Adoolessa 25,…
Simannaa ABO fi WBO, Fulbaana 15, 2018
I'm happy I lived to see this historic day-when young people (qeerroo) who peacefully pushed…
Duula Ifatti Hin Labsamin ABO, WBO fi Qeerroo Irrattii (Haala Yeroo Irratti Ibsa Adda Bilisummaa…
Walleewwan Qabsoo Hamilee fi Mooraa QBO Humneessan!